Abakhiqizi bendwangu abenziwe ngegolide i-spandex china abakhiqizi nabaphakeli | 3L Imibhalo
Indwangu yesiliva ehlanzekile eyenziwe nge-polyamide spandex
Indwangu enhle yokuvikela enemisebenzi elwa namagciwane, isiliva eligxotshwe ezintweni eziyisisekelo ze-polyamide / inayiloni Kungumkhiqizo wobuchwepheshe obuphakeme otholwe ngokuhlanganisa unomphela isiliva entweni yenayiloni ngenqubo ekhethekile esezingeni eliphakeme. Lesi sakhiwo asenzi nje kuphela ukuthi i-fiber yesiliva igcine impahla yendwangu yangempela, kepha futhi isinika wonke umsebenzi womlingo, umphumela wesiliva. Njengempahla yemvelo impela, isiliva liphilile ngokuphelele, linemvelo / liluhlaza futhi liyonga.
Isici esiyinhloko: Ukumelana okuphansi kakhulu, ukuvikela amagagasi kagesi, ama-anti-radiation, ama-antibacterial, i-deodorant (udoti), ukuqeda ugesi we-static, ukuvuselela imisipha, ukulawula ukushisa komzimba, i-anti-UV, okuluhlaza okwemvelo, ukungena komoya okuphezulu, ukugezeka / ukuphinda kusetshenziswe kabusha. , ukusebenza okuphezulu kokuvikela.
UMain Izicelo: Impahla ephelele yokuvikela, i-anti-radiation, izingubo zangaphansi ezinhle, okokugqoka, izesekeli nezindwangu zasekhaya, izingubo ezilwa namagciwane, izifihla-buso, amagilavu ​​nezindwangu zasekhaya, imikhiqizo yezokwelapha, ezemidlalo, ukuzuza kwemisipha, imikhiqizo ehambisanayo, imikhiqizo ye-anti-static.
Langaphambilini Indwangu yePolyester Taffeta Paint Copper Conductive
Olandelayo: Indwangu yesiliva eyenziwe nge-polyamide conductive / shielding
Isiliva elihlanganisiwe elenzayo lokuvikela / lokuvikela
Isiliva Gloves With Spandex (elwa namagciwane / ukubulala ...